Automatic Gravity Qi ကြိုးမဲ့ဖုန်း Car Charger Mount - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
အလိုအလျောက် Gravity Qi ကြိုးမဲ့ဖုန်း Car Charger Mount
plug အမျိုးအစား Black က
Automatic Gravity Qi ကြိုးမဲ့ဖုန်း Car Charger Mount - အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
output Interface: ယူအက်​​စ်ဘီ
အရည်အသွေးအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်: RoHS, FCC, CE
မော်ဒယ်နံပါတ်: Fast Gravity ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်
အသုံးချမြန်သောအားသွင်းချက်ပရိုတိုကောများ - Qualcomm မှလျင်မြန်စွာတာဝန်ခံ 3.0
Power ကရင်းမြစ်: ယူအက်​​စ်ဘီ
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစံ: Qi ကြိုးမဲ့စံ
input: 9V / 1.3A သို့မဟုတ် 5V / 1.5A
ရလဒ် - 9V / 1 A သို့မဟုတ် 5V / 1 A
ထုတ်လွှင့်မှုစွမ်းအား: 10W / 7.5W / 5W
10W Faster Wireless Car Charger - တတိယမျိုးဆက်လွတ်လပ်သောကွိုင်ဖြင့်အားသွင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်များထက်သင့်ဖုန်းကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် QC 3.0 charger adapter ကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ wireless car charger သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကို ၂.၅ နာရီအတွင်းအပြည့်အဝအားသွင်းပါလိမ့်မည်။
နှင့်အတူသဟဇာတ: iPhone 8/8 Plus, iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / X / XR / XS / XS Max, Samsung Galaxy Note 10, Note 9, Note 8, Note 5, S6, S6 Edge, S7 နှင့် S7 Edge, S8 နှင့် S8 Plus, S9 နှင့် S9 Plus, S10 နှင့် S10 Plus, Xiaomi Mi 9, Mix 3, Mix 2s, Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro, RS Porsche Edition နှင့်အခြား Qi-enabled ကိရိယာများ။
အလွယ်တကူတပ်ဆင်ခြင်း - ကြိုးဝိုင်းပေါ်ကြိုးမဲ့ကား charger ကိုပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုပေးသည်။ အကောင်းဆုံးအနေအထားအမျိုးမျိုးအတွက် Ball Joint Pivot သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုရန်အတွက်သင်၏ဖုန်းကိုဒရိုင်ဘာနှင့်လွယ်ကူစွာလှည့်ပါ။
တစ်လက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်း - အလိုအလျောက်ညှပ်ဒီဇိုင်းဖြင့်လွယ်ကူသောလက်ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်း - ဖုန်းကိုတောင်ပေါ်သို့လျှောချခြင်းဖြင့်ဆွဲအားဖြင့်အလိုအလျောက်သော့ခတ်နိုင်ပြီးဖုန်းပျောက်သွားပြီးနောက်ဆွဲငင်အားကိုအလိုအလျောက်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ တစ်စက္ကန့်အတွင်းအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းကိုခံစားပါ၊ ခရီးသွားခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
1 * ကြိုးမဲ့ကားအားသွင်းစက်
1 * စုတ်ယူခြင်းတောင်ပေါ်မှာ
1 * လေဝင်လေထွက်တောင်ပေါ်မှာ
1 * အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်
ပြင်သစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအရည်အသွေးသည် ၀ န်ကြီးချုပ်၏ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည့်အဓိကကျသောအချက်များဖြစ်သည်။
45 ရက်အတွင်းကိုအပ်ပစ္စည်း။ စက်ရုံထုပ်ပိုးစရာမလိုပါဘူး ဒီကုဒ်ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် အရာအားလုံးလည်ပတ်နေစဉ်ပြproblemsနာများမရှိဘဲတပ်ဆင်ထားသည်။
အားသွင်းအချိန်မီလာ၏။ box ကိုအနည်းငယ်ချိုခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပျက်စီးမှုမရှိပါဘူး ၃ မိနစ်အတွင်း ၁၀၀% samsung s100 စွဲချက်များအလုပ်လုပ်သည်။
отличныйтовар, естьбыстраязарядка! накочкахнегремит, мненравится!2ရက်ပတ်လုံးလာ၏။